यी नेताहरुले गरे पहिलो चरणमा मतदान, कसले कहाँबाट गरे ? Darpansansar News
यी नेताहरुले गरे पहिलो चरणमा मतदान, कसले कहाँबाट गरे ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ लङ्कुस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् ।
यो मतदान केन्द्रबाट उनी मतदान गर्ने पहिलो मतदाता भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस समर्थनमा रेणु दाहाल मेयरका उम्मेदवार छिन् । प्रधानमन्त्री दाहाल मतदानका लागि सपरिवारसहित शनिबार नै भरतपुर पुगेका थिए ।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महराको मतदाता नामावली रहेको प्रदेशमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैन ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पहिलो चरणमा मतदान गरेनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नामावली पनि रौतहट जिल्लामा रहेकाले जेठ ३१ मा हुने निर्वाचनमा मात्र मतदान गर्नेछन् ।